नेपाली चेलीले गरेको एउटा ट्विटले नेपाली सेना दिल्ली छिरे जस्तै तहल्का मच्चियो! – PathivaraOnline
Home > रोचक > नेपाली चेलीले गरेको एउटा ट्विटले नेपाली सेना दिल्ली छिरे जस्तै तहल्का मच्चियो!
admin May 21, 2020 May 21, 2020 रोचक, विचार	0
लेखकः दिलनिशानी मगर
लाेकान्तरबाट साभार गरिएकाे सामाग्री
नेपाली चेली मनिषालाई जनचेतनाकाे सलाम!
गतराति आकाशमा देखिएकाे चन्द्रमाकाे फरक रङ्ग राम्रो योग नभएको ज्योतिषको भनाइ !
‘हाम्रो देशको हरेक इन्च जमिन हामीलाई मुटु भन्दा प्यारो छ’ रेखा थापा